ပရိသတ်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောပါ Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 1, 2010 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 1, 2010 Douglas Karr
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိကွန်ဖရင့်၌ထိုင်နေသောဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းရေးသားရန်သင့်လျော်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက 8PM တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ညစာစားရန်စီစဉ်ခဲ့သည် Le Procope, ပါရီရှိအသက်အကြီးဆုံးစားသောက်ဆိုင် (est 1686) ။ ဂျွန်ပေါလ်ဂျုံးစ်၊ ဗင်ယာမိန်ဖရန့်ကလင်နှင့်သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်တို့ကဲ့သို့နာယကများရှိသည်။
ကျနော်တို့ကဒီမှာပဲရစ်မှာတက္ကစီရတဲ့ခက်ခဲသောအခက်အခဲရှိခဲ့သည် (အဆန်းမဟုတ်) အဆိုပါတက္ကစီလာနှင့်၎င်းတို့၏အဆင်ပြေမှာသွားပါ။ ဟိုတယ်မှာနာရီဝက်လောက်စောင့်ရတယ်၊ လမ်းထောင့်တည့်တည့်မှာအငှားယာဉ်ဆီကိုသွားခိုင်းတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ထောင့်တစ်နေရာမှာယူနိုက်တက်စတိတ်ရဲ့ထောင့်တစ်ထောင့်တစ်နေရာကအများကြီးပိုပါတယ်။ ကျနော်တို့တက္ကစီရပ်တည်ချက်နှင့်အတူလမ်းဆုံဖို့လမ်းကိုဆင်းကီလိုမီတာဝက်ခန့်လမ်းလျှောက်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် ၄၅ မိနစ်ရပ်တယ်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစာစားရန်နောက်ကျ။ ငါတို့မထွက်ခွာမီ!
နောက်ဆုံးမှာတော့ငါတို့တက္ကစီပေါ်လာတယ်၊ သေးငယ်တဲ့လှပတဲ့ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဘီးမှာနေတယ်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးမေးမြန်းခဲ့သည်။ Le Le Procope သည်ငါတို့တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်၌သူမလိပ်စာတောင်းသည်။ အရင်ကလိပ်စာကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသို့ပေးပို့ခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သေချာမသိ - စားသောက်ဆိုင်သည် Louvre ၏ပြိုကျမှု မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ။ လာမယ့် ၅ မိနစ်လောက်မှာအမေ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကအမေကသူတို့ကိုခေါ်တဲ့သူကကွီကူဆွာကိုအော်ပြောကတည်းကကျွန်တော်မကြားဖူးတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အသည်းအသန်ဝါးမျိုခဲ့တယ်။ တက္ကစီဒရိုင်ဘာကအဲဒီလိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအော်ပြောနေတာ၊ ငါတကယ်ဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့တယ်။ “ ပါရီမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီး” …။ "သူမသူတို့အားလုံးကိုအလွတ်ကျက်ဖို့ထင်ခဲ့သည်" ။ ဘီလ် (စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) နဲ့ကျွန်တော်ဟာခေါင်းပေါ်ထိုင်ပြီးကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုလိပ်စာရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ငါလိပ်စာအတွက်ဘီလ်မေးတယ်။ သူကအရာရာကိုမှတ်မိနေတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျော်လွန်ပြီးဖိစီးမှုခံရသည်ကိုဘီလ်ကကျွန်ုပ်အားကြည့်ပြီးလိပ်စာသည်ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်သူထင်မြင်ချက်ကိုပြန်ပြောပြသည်။ ဘာလို့ငါ့ကိုပြင်သစ်လိုပြောနေရတာလဲ စာလုံးပေါင်းပြရုံမျှဖြင့် !!!!” သူကပြင်သစ်အသံထွက်နဲ့စာလုံးပေါင်းပြတယ်။ ငါသူ့ကိုသတ်တော့မယ်။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Abbott နှင့် Costello တို့၏ဒေါသထွက်နေသောပြင်သစ်တက္ကစီယာဉ်မောင်းကကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားထက် ၀ က်နီးပါးခန့်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များကိုကန်သွင်းခြင်းနှင့်တူသည်။
အငှားယာဉ်မောင်းထွက်သွားတယ်။ သူမသည်အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ အော်ငိုနေစဉ်သူမမည်သည့်ကားသို့မဟုတ်လူသွားလမ်းတွင်မဆိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရဲသူဖြစ်သည်။ ပဲရစ်အလယ်ပိုင်းကိုငါတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘီလ်နဲ့ကျွန်တော်ကသာရယ်မောကြတယ်။ ငါသူမရဲ့မိန့်ခွန်းကိုပိုပြီးကောက်ယူခဲ့သည်။ “ ခေါင်းထဲမှာနေမကောင်း” …“ စားပါ” ကျနော်တို့အသွားအလာနှင့်ထွက် darted အဖြစ်။
အငှားယာဉ်မောင်းကလမ်းမ (သူမလမ်းဆုံလမ်းခွလိုတယ်) မသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးလိုက်ရှာခိုင်းတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာမြို့လယ်၊ လုံခြုံတဲ့အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲကျေးဇူးတင်စရာပါ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်သက်သေပြဇာတ်ရုံတွေကြောင့်ရယ်ခဲ့ကြတာပါ။ ငါသူမကိုပြင်သစ်လိုချစ်တယ်လို့ပြောတော့သူမကငါ့ကိုနမ်းလိုက်တာ ... ငါတို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်။
ကျနော်တို့မြို့လယ်နှင့်ပတ်ပတ်လည်လာမယ့်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒါလမ်းလျှောက် ... ယခုညစာအတွက်2နာရီနောက်ကျ။ ဒီအချိန်မှာတော့ငါတို့ကုမ္ပဏီဟာငါတို့မရှိဘဲအစာစားလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝါးဝါးစားပြီးညစာစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့လွန်သောအခါဖြစ်ခဲ့သည် Tex Mex အင်ဒီယားနား စားသောက်ဆိုင်…ဘီလ်နဲ့ငါနှစ်ယောက်စလုံးဓာတ်ပုံရိုက်ကြရတယ်။
ကျနော်တို့ထောင့်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်ငါတို့ရှေ့မှာဘုန်းအသရေ၌ရှိသမျှသော Le Procope ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့အိမ်ထဲကိုအလျင်အမြန်ရောက်သွားပြီးစားပွဲထိုးကငါတို့ကုမ္ပဏီရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ ညနေခင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောပြရင်းရယ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ညစာစားရတာအံ့သြစရာကောင်းပြီးသူငယ်ချင်းအသစ်တွေလည်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။
သင်၏ ဦး တည်ရာကိုရောက်ရန်သင်လိုအပ်သည် ဘယ်မှာအတိအကျကိုငါသိ၏ ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်နိုင်သမျှအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဤအကြံပေးချက်သည်ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်နှင့်အင်ဒီယားနားတို့ကိုကျော်လွန်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲဆိုတာပါ။ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်လိုသည်ကိုအတိအကျသိဖို့လိုသည်။ ၎င်းတို့ကိုသဘာဝမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့်သူတို့၏ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုရန်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရမည်။ ပထမဆုံးနည်းလမ်းကိုသင်မဆက်သွယ်ပါကသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြတ်သန်းရန်အခြားနည်းများကိုသင်ကြိုးစားရလိမ့်မည်။
မင်းတို့တွေးနေမိရင် ... ငါတို့မြေအောက်ရထားကိုဟိုတယ်ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်။ 🙂
Tags: ဖောက်သည်ပရိုဖိုင်းကိုဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုFinch အမှတ်တံဆိပ်IBM Smarter Commerceဈေးကွက်သုတေသနစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစစ်တမ်းအသားတင်ပေါင်း
လူမှုမီဒီယာ Guru ငှားရမ်းရန်စစ်မှန်သောအကြောင်းရင်း
2:2010 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 58
"ဘယ်မှာရှိသင်ကွန်ဖရခန်း, သင်တ ဦး တည်းတီထွင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ " - ဗော်တဲယားဖင်လန်။